Gas pains (လေနာခြင်း) - Hello Sayarwon
Gas pains (လေနာခြင်း)
Dr. May Myat Hnin Aung မှ ရေးသားသည်။ 08/02/2018 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Gas pains (လေနာခြင်း) ကဘာလဲ။
လေလည်ခြင်းနှင့် လေနာခြင်းတို့သည် အရေးကြီးအစည်းအဝေး သို့မဟုတ် လူထူထပ်သောဓါတ်လှေကားပေါ်တို့ကဲ့သို့ အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ လေလည်ခြင်းသည် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာမရှိသော်လည်း အရှက်၇ဖွယ်ရာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အူလမ်းကြောင်းအတွင်း လေများစုဝေးခြင်း ဝမ်းချုပ်ခြင်း ဝမ်းလျှောခြင်းတို့သည် လေနာခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အူလမ်းကြောင်းအတွင်း လေများစုဝေးပြီး အပြင်သို့မစွန့်ထုတ်နိုင်လျှင် လေနာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လူအများစုသည် တစ်နေ့ဆယ်ကြိမ်ခန့် လေလည်ကြသည်။ လေနာခြင်းနှင့် လေလည်ခြင်းကိုမတားဆီးနိုင်သော်လည်း ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်အနည်းငယ်လုပ်ရုံဖြင့် သင့်အူလမ်းကြောင်းအတွင်းလေထုတ်လုပ်မှုကို လျော့ကျစေပြီး အရှက်ရခြင်း၊ ကသိကအောက်ဖြစ်ခြင်းတို့မှ သက်သာရာရစေနိုင်သည်။
Gas pains (လေနာခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
လေနာခြင်းသည် အလွန်အဖြစ်များသည်။ အမျိုးသမီးများတွင် ပိုအဖြစ်များပြီး အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွာနှုန်း မြင့်မားစေသည့် အကြောင်းအရင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်သည်။ သိလိုသည်များ ရှိပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Gas pains (လေနာခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လူအများစုတွင် အောက်ပါ ရောဂါလက္ခဏာများ သိသာထင်ရှားစွာပေါ်တတ်သည်။
သိလျက်ဖြစ်စေ၊ မသိလျက်ဖြစ်စေ လေလည်ခြင်း၊ လေတက်ခြင်း၊ ဗိုက်ထဲမှစူးစူးဝါးဝါးထိုးအောင့်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
ထိုနာကျင်မှုသည် ဗိုက်၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဖြစ်နိုင်ပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန်နေရာပြောင်းကာ အလျင်အမြန်သက်သာသွားလေ့ရှိသည်။
ဝမ်းဗိုက်အတွင်းမအီမသာဖြစ်ခြင်း တင်းကြပ်ကြပ်ခံစားရခြင်းတို့လည်း ဖြစ်တတ်သည်။ တခါတရံ လေလည်ခြင်းသည် မသက်သာဘဲ ပြင်းထန်စွာနာကျင်နေလျှင် ရောဂါဆိုးဆိုးဝါးဝါးတစ်ခု ဖြစ်နေပြီဟုပင် ထင်ရသည်။ နှလုံးရောဂါ၊ သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်း၊ အူအတက်ပေါက်ခြင်းတို့နှင့် မှားနိုင်သည်။
အထက်တွင်ဖေါ်ပြခဲ့သည်နှင့် မတူသော ရောဂါလက္ခဏာများလည်းရှိနိုင်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ပတ်သတ်၍ သံသယရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နေ့လျှင်ဆယ်ကြိမ်မှ အကြိမ်နှစ်ဆယ်လေလည်နိုင်သည်။ တစ်နေ့နှင့်တစ်နေ့ မတူနိုင်ပါ။
ဆက်တိုက် သို့မဟုတ် မကြာခဏပျို့အန်ခြင်းတို့ဖြစ်လျှင် ဆရာဝန်ပြသင့်သည်။
ထို့ပြင်သင်၏ လေနာခြင်း လေလည်ခြင်းတို့သည် အလွန်ပြင်းထန်၍ ပုံ့မှန်နေထိုင်သွားလာမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေလျှင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ များသောအားဖြင့် ကုသ၍ရနိုင်ပါသည်။
Gas pains (လေနာခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အူလမ်းကြောင်းရှိလေသည် အူသိမ်မှမခြေဖျက်နိုင်သော ကစီဓါတ်ကို အူမကြီးရှိ ဘက်တီးရီးယားများက အချဉ်ဖေါက်သောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာစေသည့် အမျှင်ပါဝင်မှုများသော အစားအစာများက အဓိကတရားခံဖြစ်နေတတ်သည်။ အမျှင်ဓါတ်သည် အစာခြေလမ်းကြောင်းကို ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်စေပြီး သွေးတွင်းသကြားဓါတ်နှင့် အဆီဓါတ်ကို လျှော့ချပေးသော ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများရရှိစေသည်။ သို့သော် အူလမ်းကြောင်းအတွင်း လေပွခြင်းကိုလည်း အားပေးသည်။
အမျှင်ပါဝင်မှုများသော အစားအစာများမှာ သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ကောက်နှံများ၊ ပဲအမျိုးမျိုးတို့ဖြစ်သည်။ အမျှင်ဓါတ်ဖြည့်ရန် အပင်တမျိုးမှရသော ဈပူငကာ ဆေးကို အစားအစာထဲသို့ အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း ထည့်သွင်းစားသုံးခြင်းနှင့် ဖျော်ရည် ဘီယာတို့သောက်သုံးခြင်းကလည်း လေနာခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
လေကိုမျိုချမိခြင်း၊ သင်အစာစား ရေသောက်တိုင်း လေကိုမျိုချမိတတ်သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ အစာမြန်မြန်စားခြင်း၊ ပီကေဝါးခြင်း၊ သကြားလုံးစုပ်ခြင်း၊ ပိုက်နှင့်အရည်သောက်ခြင်း တို့တွင်လည်း လေကိုပါမျိုချနိုင်သည်။ ထိုလေများသည် သင်၏အစာခြေလမ်းကြောင်း အောက်ပိုင်းအထိ ရောက်သွားတတ်သည်။
အခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေများ၊ လေပွခြင်းနောက်ကွယ်တွင် ပို၍စိုးရိမ်ဖွယ် အခြေအနေတစ်ခု ရှိနေနိုင်သည်။ ဥပမာ အူရောင်ရောဂါများ။ ဆီးချိုရောဂါကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုးတွင် အူလမ်းကြောင်းအတွင်း ဘက်တီးရီးယားအများအပြားပေါက်ပွားခြင်းကြောင့်လည်း လေပွနိုင်သည်။
မတည့်သောအစားအစာများ၊ နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများစားသောက်ပြီး လေပွလေ့ရှိလျှင် သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှ နို့တွင်ပါဝင်သော ူခေအသျန သကြားကို မချေဖျက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကောက်နှံအချို့တွင် ပါဝင်သော ူါကအနည ပရိုတင်းနှင့် မတည့်လျှင်လည်း လေပွခြင်း ဝမ်းလျှောခြင်း ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းတို့အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။
သဘာဝမဟုတ်သော အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ၊ ျကါမေ-်မနန ဟုဆိုသည့် အစားအစာ သကြားလုံး ပီကေများတွင်ပါဝင်သော သကြားအတုကို သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှ လက်မခံနိုင်ခြင်းလည်း ရှိနိုင်သည်။ ကျန်းမာသောလူအများစုသည် ထိုသကြားတုများစားပြီး လေပွခြင်း ဝမ်းလျှောခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ကြသည်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကြောင့် လေလည်ရန်ခက်ခဲပြီး လေပွခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
Gas pains (လေနာခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ကောက်နှံများ၊ ပဲအမျိုးမျိုးတို့များစွာပါဝင်သော စားသောက်မှုပုံစံ၊ကာဘွန်နိတ်ပါသောအဖျော်ယမကာများ သောက်သုံးခြင်း၊အူရောင်ရောဂါ သို့မဟုတ် ဝမ်းပျက်တတ်သည့် နာတာရှည်ရောဂါများရှိခြင်း တို့ကြောင့် လေနာရောဂါ ပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
လေလည်သည့်အကြိမ်ရေနှင့် အသက်အရွယ် ယောကျာ်းမိန်းမကွာခြားခြင်းတို့ ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
Gas pains (လေနာခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်မှ ရောဂါရာဇဝင်ယူခြင်း၊ သင်၏စားသောက်မှုပုံစံအကြောင်း အသေးစိပ်မေးမြန်းခြင်း၊ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းတို့ပြုလုပ်၍ လေနာရောဂါဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကို ရှာဖွေနိုင်သည်။
ဆရာဝန်က စမ်းသပ်စဉ်ဗိုက်ဖေါင်းနေခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး သင်၏ဗိုက်ကိုအသာပုတ်၍ လိုဏ်သံကိုနားထောင်လိမ့်မည်။ လိုဏ်သံရှိနေခြင်းသည် ဝမ်းဗိုက်အတွင်းလေများနေသည်ကို ညွှန်ပြသည်။
သင်၏အခြားရောဂါလက္ခဏာများအပေါ်မူတည်၍ ဆရာဝန်က အူပိတ်ခြင်းကဲ့သို့အခြားပိုမိုပြင်းထန်သော ရောဂါအခြေအနေများမရှိကြောင်း သေချာစေရန် လိုအပ်သောစစ်ဆေးမှုများ ထပ်မံပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားပါမည်။
Gas pains (လေနာခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အခြားရောဂါများကြောင့်ဖြစ်သော လေနာရောဂါဆိုလျှင် ရောဂါအခံကို ကုသခြင်းဖြင့် သက်သာနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်လျှင် စိတ်ညစ်ဖွယ်ရာ လေနာရောဂါကို စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆေးဆိုင်တွင် ရနိုင်သောဆေးများသောက်ခြင်းဖြင့် အနိုင်ယူနိုင်သည်။ လူတိုင်းအတွက် ဖြေရှင်းပုံမတူနိုင်သဖြင့် အမှားအယွင်းအနည်းငယ်ရှိနိုင်သော်လည်း လူများစုတွင်ရောဂါသက်သာနိုင်ခြေရှိပါသည်။
အောက်ပါအိမ်တွင်းနည်းလမ်းများကလေနာခြင်းကို သက်သာရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
စားသောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် အစာလမ်းကြောင်းအတွင်း လေထုတ်လုပ်မှုပမာဏ လျော့ကျစေပြီး ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းလေ၏ရွေ့လျားမှု မြန်ဆန်စေရန် ကူညီပေးသည်။
သင့်ကို လေပွစေသောအစာများကို သိရှိရန်နှင့် ရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားပါ။ လူအများစုအတွက် လေပွစေသောအစာများမှာ ပဲ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ဂေါ်ဖီထုတ်၊ ကညွတ်၊ သစ်တော်သီး၊ ပန်းသီး၊ မက်မွန်သီး၊ ဇီးသီး၊ ှကါမေ-်မနန သကြားလုံး ပီကေများ၊ လုံးတီးဂျုံပေါင်မုန့်၊ ဖွဲနုမုန့် နှင့် ကွေကာ၊ နို့၊ မလိုင်၊ ရေခဲမုန့်၊ ဘီယာ၊ ဆိုဒါ နှင့် ကာဘွန်နိတ်ပါသောဖျော်ရည်များ တို့ဖြစ်သည်။
ဆီကြော်နှင့် ဆီများသောအစာများကို ရှောင်ရန်ကြိုးစားပါ။ ဆီများသော အစာများသည် လေပွစေသည်။ အဆီက အစာအိမ်တွင်းမှ အစာရွေ့လျားမှုကို နှေးစေပြီး ဗိုက်ပြည့်နေသည်ဟု ခံစားရစေသည်။
အမျှင်ပါဝင်မှုများသော အစာများကို ယာယီရှောင်ပြီး သုံးပတ် လေးပတ်နေမှ ပြန်စားပါ။ လူများစု၏ ခန္ဓါကိုယ်သည် အမျှင်များများစားခြင်းကို အလေ့အကျင့်ရရန် သုံးပတ်မျှအချိန်ယူသည်။ သို့သော်အချို့မှာ လုံးဝအလေ့အကျင့် မရနိုင်ပါ။
အမျှင်စားသုံးခြင်းကို ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲယူပါ။ သင်စားနေကျ ပမာဏကိုရပ်လိုက်ပြီး နည်းနည်းချင်းစီပြန်စားပါ။ မသက်သာလျှင် အခြားအမျှင်အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်သည့် အမျှင်ဓါတ်ဖြည့်ဆေးကို ရေတစ်ဖန်ခွက်နှင့်သောက်ပြီး တစ်နေ့လုံးရေများများသောက်ပါ။
နို့ထွက်ပစ္စည်းများကိုလျှော့စားပါ။ နို့အစား lactose မပါသည့် ဒိန်ချဉ်သောက်နိုင်သည်။
နို့ထွက်ပစ္စည်းများကို တစ်ခါစားလျှင် အနည်းငယ်သာစားသုံးခြင်း၊ အခြားအစားအစာများနှင့် ရောနှောစားသုံးခြင်းက ချေဖျက်ရပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အချို့လူနာများတွင် နို့ထွက်ပစ္စည်းစားသုံးခြင်းကို လုံးဝရှောင်ရန်လိုသည်။
အစာကို နည်းနည်းချင်းစီစားပါ။ လေပွစေသော အစာအများစုသည် ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းသော အစာများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အစာအနည်းငယ်ကို လေပွခြင်းမရှိဘဲ သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှ လက်ခံခြင်းရှိမရှိ ကြည့်ရန် အစာကို လျှော့စားပါ။
ဖြည်းဖြည်းချင်း ကြေညက်အောင်ဝါးစားပါ။ အလောတကြီးမမျိုချပါနှင့်။ ဖြည်းဖြည်းစားရန် အခက်အခဲရှိလျှင် အစာတစ်လုတ်နှင့် တစ်လုတ်အကြား ဇွန်းကိုချထားပါ။
ပီကေဝါးခြင်း၊ သကြားလုံးအမာကို စုပ်စားခြင်း၊ ပိုက်ဖြင့်သောက်ခြင်းတို့သည် လေကိုမျိုချမိစေနိုင်သောကြောင့် ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
အံကပ်များကို စစ်ဆေးပါ။ ကောင်းစွာမကပ်နေသော အံကပ်များသည် အစာစား ရေသောက်ရာတွင် လေအပိုအလျံများကို မျိုချမိစေသည်။
ဆေးလိပ်မသောက်ပါနှင့်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် လေအပိုများကို မျိုချခြင်းဖြစ်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုသည် အစာလမ်းကြောင်းထဲမှ လေများကို ထွက်စေသည်။
လေလည်သည့် အနံ့ဆိုးကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေပါက ဆာလ်ဖာပါဝင်မှုများသော အစာများဖြစ်သည့် ဂေါ်ဖီအနွယ်ဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ဘီယာနှင့် အသားဓါတ်ပါဝင်မှုများသောအစာများကို ရှောင်သင့်သည်။ အတွင်းခံတွင် မီးသွေးပါဝင်သော အခုအခံများကိုသုံးခြင်းဖြင့် အနံ့ဆိုးများကို သက်သာစေသည်။
သိလိုသည်များရှိပါက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေကို ရရှိနိုင်ရန် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gas-and-gas-pains/basics/lifestyle-home-remedies/con-20019271. Accessed October 26, 2017.
https://www.healthline.com/health/digestive-health/get-rid-of-gas-pains-and-bloating#causes5. Accessed October 26, 2017.
မိုးရေနဲ့အတူ ပါလာတတ်တဲ့ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်း
ဝမ်းကိုက်ခြင်း အကြောင်း သိကောင်းစရာ